Injiilka oo ku qoran af-soomaali - Page 2 of 29 - Kani waa boga shabakada internetka ee aad ka fahmi Injiilka iyo dhamaan khayrkii aay ku hadleen nebiyadu.
Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa Luulyo 24 iyo Ogosto 23 waxaad tahay Leo, Laatiin libaax. Akhrinta horoscope casrigan casriga ah ee zodiac-kii hore,… Read More »Leo ee Zodiac qadiimiga
Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa Diisambar 22 iyo Janaayo 20 waxaad tahay Capricorn. In this turjumaadda horoscope casriga ah ee zodiac xiddigiska,… Read More »Capricorn ee Zodiac qadiimiga
Aries waa kooxda sideedaad ee Zodiac waxayna soo gabagabaynaysaa Unugga Zodiac iyagoo muujinaya natiijooyinka nooga soo baxay guusha Midka imanaya. Aries waa sawirka wan nool… Read More »Aries ee Zodiac qadiimiga ah